गृहकार्य नगरेकै कारण यसरी कुटिए विद्यार्थी ! « On Khabar
गृहकार्य नगरेकै कारण यसरी कुटिए विद्यार्थी !
२० पुस, बुटवल । रुपन्देहीको सम्मरिमाई गाउँपालिका ६ को ज्ञानदिप बोर्डिङ स्कुलमा एक शिक्षकको कुटाईबाट विद्यार्थी गम्भीर घाईते बनेका छन । कुटाइबाट उनको आँखामा चोट लागेको छ ।
शिक्षकबाट आफ्नो सन्तान निर्घात कुटिए पनि प्रहरीले उजुरी लिन नमानेको गुनासो परिवारका सदस्यले गरेका छन् । तौफिक कुटिएपछि संलग्नमाथि कारबाही माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय मर्चवारमा पुगे पनि दर्ता नभएकाे परिवारकाे भनाइ छ ।
तर, मचर्चवारका कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक पोषणराज ढकालले प्रक्रिया नपुर्‍याइ उजुरी आएकाले दर्ता नगरिएको बताए । घाइतेको उपचारमा ध्यान दिन र प्रक्रिया पुर्‍याएर उजुरी दिन आफूले आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । (अनलाईनखबरको सहयोगमा)